बजेट लेखनमा नयाँ टीम
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट मस्यौदा टोली गठन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्ष (२०७९/८०)को बजेटका लागि मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङ पठाएसँगै अर्थले बजेट लेखन गृहकार्यका निम्ति मस्यौदा टोली गठन गरेको हो ।
सामान्यतया बजेट महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा त्यस्तो टोली गठन गरिने भए तापनि चालू आर्थिक वर्षको बजेट लेखनमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको नेतृत्व गरेको थियो भने आगामी वर्षका लागि आर्थिक नीति तथा विश्लेषण महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा बजेट लेखन मस्यौदा टोली गठन गरिएको छ ।
आगामी वर्षको बजेट लेखनमा गत वर्ष बजेट लेखनमा संलग्न दुई सहसचिव परेका छन् भने तीन नयाँ अनुहार छन् । गत वर्षको बजेट लेखन संयोजक रहेका श्रीकृष्ण नेपाल यो पटक पनि मस्यौदा टोलीको सदस्य रहेका छन् । गत वर्ष सदस्यको रूपमा रहेका बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा भट्टराई यो वर्ष पनि लेखन समितिमा रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
बिहीबार गठन गरिएको मस्यौदा टोलीको संयोजकको भूमिका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले पाएका छन् । उपसचिवका रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा पहिले काम गरिसकेका उनी यसअघि गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास सचिवका साथै अर्थ मन्त्रालय योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखको रूपमा काम गरिसकेका छन् । अहिले भने उनी आर्थिक नीति तथा विश्लेषण महाशाखा प्रमुखको रूपमा रहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका नौ महाशाखामध्ये पाँच महाशाखा प्रमुख राखेर मस्यौदा टोली गठन गरिएको हो । अन्य दुई जनामा भने अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहाल र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामेश्‍व दंगाल रहेका छन् ।
बजेट महाशाखा प्रमुख शर्मा ठूला करदाता कार्यालमा रहँदादेखि नै बजेट लेखनमा सक्रिय छन् भने दाहाल भन्सार जानकार मानिन्छन् । उनी यसअघि अर्थमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख भएर भन्सार विभागमा सुरुवा भएका थिए । भन्सार महानिर्देशको रूपमा डेढ वर्ष काम गरेपछि उनी एक साताअघि पुन: अर्थ मन्त्रालयमा फर्किएका हुन् ।
दंगाल भन्सार विभागका साथै आन्तरिक राजस्व विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी पनि निभाएका व्यक्ति हुन् । उनी गण्डकी प्रदेशको अर्थसचिवका साथै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा पनि बसेका थिए ।
कोभिड- १९ संक्रमणपछि ऋणात्मक बनेको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन आवश्‍यक पर्ने नयाँ नीतिका साथै बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बजेट मस्यौदा टोलीले सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले अघिल्लो वर्ष विनियोजन गरिएको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा बजेटको आकार घटाएका थिए । त्यस्तै कोरोनाको कारण स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि चालु वर्ष पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट घटाइएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. पुष्पराज कँडेले भने अघिल्लो मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार बजेट निर्माण गर्ने ठाउँ रहेको प्रतिक्रिया दिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०७८/७९ को मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार २०७८/७९ को बजेटको अनुमान २० खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ गरिएको थियो । तर, त्यस समयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अनुमान १७ अर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ गरिएकोमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ कम आकारको चालू वर्षको बजेट आएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २१, २०७७, १९:५७:००